Sendikan’ny mpitsara : Mitovy hevitra amin’ny Filoham-pirenena -
AccueilRaharaham-pirenenaSendikan’ny mpitsara : Mitovy hevitra amin’ny Filoham-pirenena
22/04/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Nazava androany ny antom-pisian’ny sendikan’ny mpitsara manerana an’i Madagasikara, taorian’ny fivoriana tsy ara-potoana notanterahin’izy ireo androany tetsy Anosy izay narahina fanambarana. Tsy fanekena ny kolikoly, ny fahalalan’ny fitsarana, ary ny fampandrosoana, ireo no anisan’ny nasongadin’ny SMM ary lohahevi-dehibe voarakitr’io fanambarana io. Ny Filoham-pirenena rahateo mantsy raha tsiahivina dia efa nilaza ombieny ombieny ny tokony hanaovana ny laharam-pahamehana ny ady atao amin’ireo fahalovana eto amin’ny firenena. Dia tsy inona izany fa ireo voalaza sy mbola averin’ny sendikan’ny mpitsara androany ireo. Tsy izany ihany anefa fa eo ihany koa ny fametrahana ny tany tan-dalàna izay voalaza ao anatin’ny fanambaran’ny SMM ihany koa, satria dia izany no antom-pijoroan’ny SMM tamin’ireo hetsika rehetra nataon’izy ireo. Io fametrahana ny tany tan-dalàna io ihany koa anefa izay isaka ny misy ny kabary ataon’ny Filoham-pirenena ary hanompanany ny heriny. Noho izany dia mifameno ny asa izay hotanterahina sy ny zava-kinendry, ka samy handray ny andraikiny manoloana azy avy ny roa tonta. Ny Filoham-pirenena moa zay efa nitari-dalana amin’ny isian’ny fanarahan-dalàna hatrany teto amin’ny firenena.
Manoloana io fampiharana ny tanin-dalana io, ary voarakitra anatin’ny fanambarana izay nataon’izy ireo dia nanamarika ny sendikan’ny mpitsara fa tsy misy ambonin’ny lalàna ny rehetra. Noho izany, dia nanazava ary nampahafantatra ny olom-pirenena izy ireo androany fa misy ny sampandraharaha izay natao hitarainana raha toa ka misy ny mpitsara tsy manao ny asany ara-dalàna. Tsy tokony hisy ihany koa hoy ny SMM noho izany ny fandrahonana mpitsara manao ny asany satria dia azo atao tsara ny manao fitarainana amina fahitana tsy fanarahan-dalàna ataon’izy ireo. Ny fandrahonana atao, izay tsy hileferan’ny sendikan’ny fitsarana mihitsy.
Nitondra faisana lehibe teo amin’ny tondro ara-toekarena sy ara-tsosialy teto Madagasikara, fa indrindra teo amin’ireo mponina tena marefo ny faharetan’ny krizy politika, vokatry ny fanonganam-panjakana nataon-dRajoelina Andry. Nanomboka teo dia nihamafy ny fahantran’ny vahoaka malagasy ...Tohiny